Maxay ku biirtay Xiriirada ka Dhigan yahay?
Marka aad leedahay magacyo badan qofka isku mid ah iyo magaca kasta oo qof in uu leeyahay tiro xiriir kala duwan badbaadiyey in aad telefoon Android mobile, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka saarto magacyada nuqul ka mid ah liiska xiriirada iyo badbaadin oo dhan tirada dadka ah ee qofka magaca hal .
Sidoo kale, marka aad leedahay mobile entries isku mid (qofka isla tiro isku mid ah) badbaadiyey marar badan ee taxanaha xiriirka, ay ka saareen oo dhan entries nuqul ka mid ah liiska lagama maarmaan noqoto. Habka noocan oo kale ah waxaa mararka qaarkood sidoo kale loo yaqaan biirtay xiriir ah.
Waxaad ku milmaan karaa xiriirrada nuqul liiska xiriirka Samsung / Android mobile ee soo socda saddex siyaabood oo kala duwan:
Qaybta 1. midowdo xiriir la isticmaalayo Wondershare MobileGo
Isticmaalka Wondershare MobileGo waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud in ay ku milmaan xiriirada nuqul ku saabsan smartphone Android. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa, u tag qaybta xiriirka hoose siiyey, download iyo rakibi nooca ugu dambeeya ee Wondershare MobileGo sida ay madal ee nidaamka qalliinka aad isticmaasho (Windows ama Mac), oo ku milmaan xiriir ah. Dhammaan waxa ay qaadataa waa qasabno yar mouse.
Waxaad ka heli kartaa tilmaamaha tallaabo-tallaabo aad u heli karto hoos ku samaysay:
1. Ka dib degsado iyo ku rakibidda Wondershare MobileGo on your computer, double-guji toobiye icon ay u bilowdo barnaamijka.
2. in ay PC isticmaalaya cable xogta in geeyey weheliyaan waxaa la Connect telefoonka aad Android.
3. Sug inta MobileGo ogaadaa aad telefoon oo ku rakibtay wadayaasha looga baahan yahay labada on kombiyuutarka iyo aad casriga Android.
4. telefoonka, marka ay keentay in, on the ogolow USB debugging sanduuqa, tubbada si uu u hubiyo ka Had iyo jeer u ogolaan computer this checkbox.
5. Tubada OK in ay oggolaadaan in aad telefoon in ay aaminaan your computer oo ay ku xiran yihiin.
6. your computer, ku furay Wondershare MobileGo ee interface ah, ka Murayaad bidix, guji si loo xusho category Xiriirada.
7. From sare ee interface ka, guji De-nuqul .
8. ku midowdo Xiriirada nuqul uu furmo suuqa, jeeg ama uncheck checkboxes matalaya xisaab xiriirada ku jiraan entries nuqul in aad rabto in aad ku milmaan. Fiiro gaar ah: Waxa lagu talinayaa in uu ka tago oo dhan checkboxes ah loo hubiyaa in .Wadashaqayntaas fiican.
9. Riix Next in ay sii wadaan ..
10. Sug inta baaritaano MobileGo Wondershare for Entries nuqul.
11. Marka iskaanka waa dhameystiran, ka natiijooyinka soo bandhigay, hubi checkboxes matalaya xiriirrada nuqul in aad rabto in aad ku milmaan.
12.Finally click ku milmaan soo xulay dhankiisii ​​midig hoose oo ka mid ah ay ku milmaan Xiriirada nuqul daaqaduhu ay ku milmaan xiriirrada la xushay nuqul ku saabsan telefoonka.
Qaybta 2. midowdo xiriirada isticmaalaya Gmail
Si kale oo ku biirtay xiriirrada nuqul ku saabsan telefoonka waa la isticmaalayo Gmail. Tan iyo markii aad xisaabta Gmail waxaa si toos ah synced aad telefoon sida ugu dhakhsaha badan waxaa lagu daray, wixii isbeddel ah in aad sameyso ee taxanaha xiriirka idinka aawadiin Gmail yihiin beehsa aad smartphone Android sidoo.
Waxaad raaci kartaa tallaabooyinka hoos ku siiyey in ay ku milmaan xiriirrada nuqul adiga oo isticmaaleya isticmaale xisaabta Gmail:
1. aad PC, furo web browser doorbidayso.
2. Is-ku in aad xisaabta Gmail.
3. Laga bilaabo dhinaca kore ee bidix, guji Gmail .
4. Laga soo fursadaha soo bandhigay, guji Xiriirada .
5. Marka aad bogga Xiriirada, ka sare ee ay leeg- saxda ah, guji More .
6. Laga bilaabo fursadaha soo bandhigay, guji Raadi & midowdo tus .
7. On the ku milmaan xiriirada nuqul bogga, ka mid ah liiska soo bandhigay, uncheck checkboxes matalaya xiriirrada in aadan rabin inaad ku biirto. (Ikhtiyaar)
8. Click midowdo ka hoose ee bogga si aad u dhamayso.
Qaybta 3. midowdo xiriir la App Android ah
Waxa intaa dheer in talaabooyinka xagga sare, waxa kale oo aad ku milmaan karo xiriirada la isticmaalayo wax app Android hufan. A-ada yar oo lacag la'aan ah in lagu mahadiyo badan oo dadka isticmaala Android hoos ku qoran.
• Xiriirada Optimizer (Star Rating: 4.4 / 5)
Xiriirada Optimizer badan yahay ee app Tababaraha xiriir ah oo sidoo kale ay ka muuqatay dhisay-in la helo oo ku biirtay Entries nuqul ku saabsan smartphone Android. App sameysaa lafaguris qoto dheer oo aad xiriirka la leedahay telefoonka iyo iyaga maamushaa si hufan si loo siiyo a xiriirada liiska si fiican u diyaarin.
Waxaad kala soo bixi kartaa Xiriirada Optimizer si toos ah uga Google Play Store adigoo raacaya link hoos ku siiyo:
Qaar ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee in Xiriirada Optimizer uu leeyahay waxaa ka mid ah:
Ogaadaa xiriirada nuqul oo iyaga ku biiro.
Bixisaa xiriirada isku galay times.M badan
Dhaqdhaqaaqa shaqsi ama xiriirada kala duwan si ay u xisaab kala duwan.
Bixisaa beeraha madhan oo ka mid ah xiriirada badbaadiyey.
• fudud ku milmaan tus (Star Rating: 4.4 / 5)
Midowdo fudud tus weli app kale Android inay la midowdo xiriirada nuqul ku saabsan telefoonka ee ah tallaabooyinka fudud ee yar. Barnaamijka waxaa lagu heli karaa luqado kala duwan oo si toos ah lagala soo bixi karaa Google Play Store adigoo raacaya link hoos ku siiyo:
Simple oo toos user interface.
Sawirro iyo Galiyo xiriirada nuqul si deg deg ah.
Available in 15 luqadood oo kala duwan.
Maareynta buugga cinwaan oo dhan si fudud.
• midowdo + (Star Rating: 3.7 / 5)
Midowdo + waa app kale Android inay ka heli iyo midowdo xiriirada nuqul in aad telefoonka ee xiriirada liiska ku ah tallaabooyinka fudud ee yar, xitaa codkaaga amarka. Waxa intaa dheer in, app uu leeyahay muuqaalada hufan yar in badan oo ka mid ah tartanka kama samayn. Barnaamijku waa bilaash ah oo lagala soo bixi karaa Google Play Store adigoo raacaya link hoos ku siiyo:
Qaar ka mid ah sifooyinka muhiimka ah ee ku milmaan + ayaa waxaa ka mid ah:
Taageerada cod fari inaad ku biirto xiriirada nuqul.
Taageerada Xidho Android taas oo macnaheedu yahay waxaad ku milmaan karaa xiriirrada nuqul ka smartwatch Android sidoo.
Midowdo talooyin si toos ah arki karaa on your smartwatch Android.
Ka aqbashay cod amra xataa aad smartwatch Android oo iyaga si fiican u fuliyay.
Biirtay xiriirada nuqul noqdo mid aad u muhiim ah marka aad tahay bulsho caan ah oo u isticmaaleysaa xisaabtaada Gmail si ballaadhan u isgaarsiinta. Isticmaalka kasta oo ka mid ah hababka kor ku xusan, waxa aad maamuli kartaa xiriirada aad telefoonka iyo ku milmaan karaan kuwa nuqul fudayd.
TOP 5 kale oo u Samsung link
> Resource > Android > 3 Siyaabaha la midowdo Xiriirada Samsung / Phones Android